बिना दोब्बर मतान्तरले विजयी, को हुन् बिना ?(जिवनी सहित) – Saurahaonline.com
बिना दोब्बर मतान्तरले विजयी, को हुन् बिना ?(जिवनी सहित)
कञ्चनपुर, २५ मंसिर । कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार बिना मगर निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बर मतान्तरले विजयी भएकी छिन्।
बिना मगरले ३८ हजार ४ सय ६७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार दिवानसिंह विष्टले १९ हजार २ सय १९ मत पाएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
बिनाले दिवानभन्दा १९ हजार २ सय ४८ बढी मत पाउनुभएको छ । ८८ हजार ५९ मतदाता रहेको कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा ६३ हजार ३ सय १ मत खसेकोमा ६० हजार २ सय ६३ मत सदर भएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत उमेदवार रहनु भएकी बिना मगर कांग्रेसका दिवानसिंह विष्टसँग पराजित भएकी थिईन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै बिना मगर कञ्चनपुरबाट केन्द्रीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पुग्ने पहिलो महिला बनेकी छिन् ।
को हुन् ? बिना मगर हेरौँ
पुनः दोस्रो पटक पनि भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पार्ने मनसायले बिना मगर लगायतका बन्दीहरूलाई शिवपुरी ब्यारेकमा सारिएको थियो । तर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय